Wiilka Mareexaan ee Muqdisho jooga waxba idiinma hayo | allsanaag
Wiilka Mareexaan ee Muqdisho jooga waxba idiinma hayo
Xisbiga Amiin Caamir taageersan yahay ee Kulmiye maxaa looga mudaharada Laascaanood?
labo cisho ka hor ayaa magaalada Laascaanood waxa looga mudaharaaday oo ka cararay hogaamiyaha Xisbiga Beelaha Isaaq ee Habar jeclo iyo Habar Awal ee Kulmiye ee uu la dhacsan yahay taariikhdiisa farshaxanka Soomaaliyeed Amiir Camir oo afka dufan loo mariyey.
Mudaharaadkan ayaa wuxuu bilowday marki uu dagaal ooge Muse Biixi hadalkiisa ku bilaabay sidan isaga oo is modaya inuu joogo Wadaamagooye iyo Waqooyi galbeed ” Wiilka Mareexaan ee Muqdisho joogaa waxba idiinma hayo ee waxaad ku khasban tihiin inaad ka mid noqotaan Somaliland”
Sadexda Xisbi ee wada tartamaya ayaa ka soo wada jeeda Beesha Isaaq, sidoo kalena weligood waxay lahaayeen wasiirka arimaha gudaha maamulkaas . Labo sano ka hor ayaa markii ugu horaysay loo magcaabay wasiir ka soo jeeda gobolka Sool arimaha gudaha . Khudbaddii uu maalintaa xil kala wareejinta labada wasiir ka jeediyey Muusw Biixi ayaa waxay ahayd ” ”Reer laascaanood waxaan wasiirka arimaha gudaha uga barinay Cali warancade”. Cali Warancade ayaa markaa ahaa wasiirka arimaha gudaha waxaana lagu bedelayey Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon)
← Raaf ku socda Qoyska reer Ala Sacuud War murtiyeed maanta maxaa looga reebay qodobadan →